> Resource > Beddelaan > Sida loo Encode DVD Faylal ay la DVD Encoder
Wondershare DVD encoder waa xalka oo dhan-in-ka mid ah DVD ah. Sidaa daraadeed, ma waxaad abuuri karaan oo kaliya DVDs (ama faylasha video DVD-) ka kale oo caan ah oo video files, laakiin sidoo kale encode DVDs in hal file video ah. Its magaciisa oo buuxa waa Wondershare Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ). Hagaha hoos ku tusi doona sida ay u isticmaalaan this daaqadaha version of DVD encoder si ay u kala horreeyaan u adkeeyo laba hawlaha. Just sida ay baahidaada, raac tallaabooyinka u dhiganta. Marka hore, soo baxdo iyo rakibi codsigan weyn.
Qeybta 1: Samee DVDs ka videos qaabab kala duwan leh DVD encoder Wondershare
Qeybta 2: DVDs Encode in kasta oo qaab video caanka ah ama qalab
Qeybta 1: Samee DVDs ka kala duwan videos la DVD encoder this
Burcad app this, guji Gubashada tab sare ee interface hadda, ka dibna bilaabaan si ay u abuuraan DVDs ka video files.
Talaabada 1: Import video files
Ugu geeska kore ee bidix ee ah "Guba" interface, riix badhanka xitaa your computer dooro video files aad rabto in aad ku shuban. Ama furo gal meesha faylasha aad ku kaydsan yihiin, ka dibna si toos ah jiidi files bartilmaameedka in app this.
Talaabada 2: Dooro DVD menu ah
In guddi "Guba Settings", riix "Change Template" doorasho, ka dibna u doortay mid ka mid ah DVD template menu in astaysto DVD kuu gaar ah menu, iyo sidoo kale dar jeeda music iyo sawir. Haddii u baahan tahay, waxa kale oo aad edit karaa faylasha aad hortiisa ka ololaya. Kuwani qalab sixiddiisa yihiin beerista, falinjeeerka, watermarking, isagoo intaa ku daray saamayn qabow iyo Cinwaan.
Tallaabo 3: Ku bilow Deji DVDs
Markii wax walba la sameeyo, kaliya riix "Guba" button ee geeska hoose ee midigta ah "Guba" interface.
Qeybta 2: DVDs Encode kasta video caanka ah ama qalab
In qaybtan, waxaadna ku gaari kartaa ujeedooyinka sixiddiisa DVD files in qaar ka mid ah software video tafatirka iyo daawashada DVD ururin ku saabsan qalabka qaar ka mid ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa Deji DVD aad u video files. Si aad u sameeyo, marka hore, abuurtaan app iyo geli default interface ka. Markaas, raac tallaabooyinka hoose.
Talaabada 1: DVDs Load
Tani app siinayaa laba hab oo loo soo dhoofsadaan DVD. Marka aad is geliso DVD disc ah, sidoo kale drectly aad soo jiidi kartaa DVD icon in ay app ama riix "DVD Load" doorasho ee geeska geeska top-bidix ee interface in ay ku shuban DVD.
Talaabada 2: Dooro qaab wax soo saarka ama qalab
In "Qaabka Output" guddiga dhinaca midig ee interface ka, dhuftay image qaab ah in la furo ay suuqa kala qaab wax soo saarka. Markaas, si xor ah u doortaan qaab video ah ama qalab aad rabto.
Saxaafadda "Beddelaan" button rukun-xaq u hooseysa interface default ugu weyn ee ay. App Tani ayaa ku bilaaban doona Deji DVD. Ka dib markii in, waxaad ka heli kartaa faylasha wax soo saarka sida ay jidka file wax soo saarka hoose ee interface ka.